Jennifer Garner anotsiva Julia Roberts mune Chinhu Chekupedzisira Chaakandiudza | Ndinobva ku mac
Jennifer Garner anotsiva Julia Roberts mune Chinhu Chekupedzisira Chaakandiudza
Muna Zvita wegore rapfuura, Zvakaziviswa nekufara kukuru kuti Julia Roberts achange ari nyeredzi yenhevedzano paApple TV +. Rinenge gore gare gare, vateveri veiyi mutambi ane simba vacharwadziwa nekuziva kuti haachazove nyeredzi yeChinhu Chekupedzisira Chaakandiudza. Panzvimbo yake pachava nemumwe mutambi mukuru, asingakanganwike mumafirimu akawanda. Jennifer Garner iye zvino achava nyeredzi paApple TV +.
Chinhu Chekupedzisira ChaAkandiudza, chakavakirwa parinonyorwa raLaura Dave rezita rimwe chete iro rakaburitswa muna Chivabvu. Kurongeka kwebhuku uye nhevedzano ichave nekutevera mukadzi (akaridzwa naJennifer Garner) anobatana nemwanasikana wake wekurera ane makore gumi nematanhatu kuti aone chikonzero chekutsakatika kusinganzwisisike kwemurume wake. Iyi series ringadai riri basa rechipiri raJulia Roberts padiki screen mushure mekuita nyeredzi mumwaka wekutanga we Homecoming paAmazon.
Nekudaro, uye nekuda kwehurongwa uye matambudziko ekuronga, Julia haazokwanisi kuva protagonist. Panzvimbo yake pachange paine Jennifer Garner, sekureva kwaDeadLine, uyo achaita nyeredzi munhevedzano. Asi mutambi achavewo mugadziri mukuru weakaganhurwa akateedzana akagadzirwa naReese Witherspoon's Hello Sunshine, Chinhu Chekupedzisira Chaakandiudza chakaitwa naDave nemurume wake Josh Singer, akahwina Oscar yeBest Original Screenplay ye "Spotlight".
Kwete Jennifer Garner yekutanga chirongwa cheApple TV + nekuti ari zvakare nyeredzi mukati uye mukuru achigadzira Apple TV + adapta ye Amy Silverstein Memoirs "Kubwinya Kwangu Ndanga Ndine Shamwari Dzakadaro". Panguva ino ane rubatsiro rwaJJ Abrams naBen Stephenson weBad Robot avo vanobatanidzwa kune purojekiti sevagadziri vakuru.
Zvinonyadzisa kusakwanisa kuvimba naJulia Roberts asi mufaro kukwanisa kuzviita naJennifer Garner.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Jennifer Garner anotsiva Julia Roberts mune Chinhu Chekupedzisira Chaakandiudza
MacBook yebhizinesi, Apple musimboti mu3D uye zvimwe zvakawanda. Zvakanakisa zvesvondo pandiri kubva kuMac
Foxconn anotenda kuti kushomeka kwechip kuchagara kusvika hafu yechipiri ya2022